HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea iyo Manchester United oo isha ku haya saxiixa Kingsley Coman
Kooxaha Premier League ku xifaaltama ee Chelsea iyo Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay labaduba qiimeynayaan inay xagaaga u dhaqaaqaan garabka kooxda Bayern Munich ee Kingsley Coman .
Xiddiga reer France ayaa wadar ahaan 18 gool iyo caawinaad u sameeyay Bayern xilli ciyaareedkii wacnaa ee 2020-21.
Bayern ayaa isha ku heysa inay qandaraaska u kordhiso Coman dhamaadka 2022-23 markaasoo uu haatan dhacayo, laakiin 24 jirkaan ayaa lagu xantaa inuu diiday dalabkoodii ugu horreeyay.
Sida laga soo xigtay wargeyska Jarmalka ee Fussball Transfers , Chelsea iyo United ayaa sii wadaya inay la socdaan xaalada Coman ee garoonka Allianz Arena waxaana laga yaabaa inay u dhawaadaan marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Waxaa la soo jeedinayaa in xiddigii hore ee Paris Saint-Germain iyo Juventus, oo kula guuleystay horyaallo seddex dal oo kala duwan, inuu doorbidayo inuu sii joogo Bavaria.
Coman ayaa 197 kulan u saftay Bayern laba jeer oo uu la joogay kooxda, isagoo u dhaliyay 39 gool.